जय पृथ्वीबहादुर सिंह राष्ट्रिय विभूति घोषित
'५४ वर्षअघिको काठमाडौं किसानको शहर, अहिले कंक्रिटको पहाड'- आर्किटेक्ट वुल्फ ग्याङ कर्न
बाटोमा गाडी कुरेर बसेका जनतालाई लिफ्ट दिने राजा
पढ्न लाग्ने समय : 17 मिनेट
ताहाचलको घर मेरा बाले म जन्मिएपछि किन्नुभएको हो।
मेरा बा पाटनबाट ताहाचल आउँदा सुरूमा डेरा बस्नुभएको थियो। मेरो जन्म त्यही डेरामा भयो। दाइ र दिदी दुवै वीर अस्पतालमा जन्मेका हुन्। सायद त्यस बेलाका नामुद स्त्री तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. सावित्री गुरुङको निगरानीमा। म भने घरमै जन्मेँ।
बिहान गर्भवती श्रीमती छाडेर गएका मेरा बाले दिउँसो खाना खान आउँदा सुत्केरी श्रीमती भेट्नुभयो। खबर गर्ने उपाय थिएन। मोबाइल त जेम्स बोन्डको फिल्ममा समेत देखिएको थिएन। फोन पनि दुर्लभ।
म जन्मेको घरको नाम थियो – मेरो महल।
टंकेश्वरको विष्णुमती पुलबाट पश्चिम लागेपछि छाउनी–ताहाचल छुट्टिने मोड आउँछ। त्यो मोडबाट पाँच सय मिटर ताहाचलतर्फ बढेपछि 'टुरिस्ट क्याम्प' भन्ने लज थियो। त्यसको अगाडि बल्ने ग्यास मिसिएको पानीको फोहोरा थियो। त्यहाँबाट पश्चिम लागेपछि सडकको दक्षिणतिर वासुदेव लुइँटेलको ‘मेरो महल’ आउँथ्यो।
त्यही घर बाले भाडामा लिनुभयो। त्यहीँ आफ्नो व्यवसाय पनि गर्नुभयो।
हाम्रो आफ्नो घर भने सन् १९७३ मा बन्यो। लुगा धुने व्यवसाय भएकाले होला, बाले घर बनाउन दक्षिण मोहडाको पारिलो पाखो रोज्नुभयो। सुरूमा रोपनीको ५ हजार रूपैयाँमा किनेको सुनेको हुँ। पछि जग्गा थप्दै जाँदा डेढ लाखसम्म परेको थियो रे।
त्यही पाखाको टुप्पोमा हाम्रो दुईतले घर थियो, 'अस्बेसटस' सिटले छाएको। बेसीमा लुगा धुने कारखाना, पाखाभरि लुगा सुकाउने डोरी।
‘फोहोरा’ अघिको लुगा सुकाउने पाखो भनेपछि पूरै ताहाचल र ताहाचल हुँदै सहर छिर्ने बाफल, स्यूचाटारका सबैले हाम्रो घर चिन्थे।
घरको भित्तामा सानो चारपाटे टिन ठोकिएको थियो, जहाँ कालो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षरले लेखिएको थियो – टंकेश्वर ८/२०, ताहाचल गा.प.। अर्थात्, काठमाडौं जिल्ला, टंकेश्वर ताहाचल गाउँ पञ्चायत, वडा नम्बर ८, ब्लक नम्बर ८/२०।
वडामा दर्ता भएको बीसौं घर भएकाले हाम्रो घरको ब्लक नम्बर ८/२० भएको होला भन्ने म अनुमान गर्छु।
नगर पञ्चायतअन्तर्गत आएपछि हामी वडा नम्बर १३ का बासिन्दा भयौं। घर नम्बर भयो – का.न.प. वडा १३, ख २-२७२, काठमाडौं- ४।
यो नम्बरको पूरा अर्थ मैले बुझेको छैन, सायद त्यस बेला काठमाडौंलाई क्षेत्रगत विभाजन गर्दा ताहाचल ४ नम्बर क्षेत्रमा परेको हुनुपर्छ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नगर पञ्चायत नगरपालिका बन्यो, वडा नम्बर भने त्यही कायम रह्यो।
त्यसपछि मेट्रिक प्रणाली भनेर हाम्रो घरको नम्बर फेरि परिवर्तन भयो – ६६८ ताहाचल मार्ग।
यो नम्बर दुरीमा आधारित छ। विष्णुमती पुलबाट सोल्टी होटल पछाडिको गेट हुँदै बाफल पुग्ने बाटोलाई 'ताहाचल मार्ग' भनिन्छ। यसको सुरुआती विन्दुबाट हाम्रो घर ६६८ मिटर दुरीमा पर्ने भएकाले उक्त नम्बर राखिएको हो। दुरी र मार्गको दायाँ-बायाँ हेरेर घर नम्बर जोर-बिजोर हुन्छ।
ताहाचल त्यो बेला गाउँ नै थियो। टंकेश्वर विष्णुमती पुलदेखि सोल्टी होटल पछाडिको गेटसम्म हामीलाई आफ्नै टोलजस्तो लाग्थ्यो। त्यो बाटोमा पर्ने सबै घर परिचित। त्यहाँ बस्ने सबै मान्छे परिचित।
विष्णुमती पुलको पश्चिम मोडमा एउटा सानो पसल थियो- ध्रुव दाइको पसल। ताहाचलभरि ‘कोक’ पाउने पसल त्यही एउटा थियो। त्यस बेलाको आधुनिक कोल्ड स्टोर। 'टुरिस्ट क्याम्प' लज र स्वयम्भुतिर बस्ने हिप्पीहरूलाई लक्ष्य गरेर होला, ध्रुव दाइले विदेशी बिस्कुट, टिन फिस लगायत सबै बेच्थे। प्याकेटका ती सबै चिज झिलिमिली देखिन्थे।
सडकबाट दुई खुड्किला मुनि झर्नुपर्ने त्यो पसल सामानले खचाखच भरिएको हुन्थ्यो। हामी त्यसलाई ‘मोडको पसल’ भन्थ्यौं।
गर्मी यामको सुरूआतसँगै त्यो पसलअगाडि बाले गाडी रोक्दा हामी केटाकेटी दंग पर्थ्यौं। भारतबाट आयातीत एक क्रेट कोकाकोला गाडीमा लोड हुन्थ्यो। काठको अर्को क्रेटमा सुन्तला रङको 'स्टार अरेन्ज', कागतीको झोल रङको 'स्टार लेमु' र पानी रङको 'स्टार अक्वा' (सोडा) भरिएका हुन्थे।
तीमध्ये कोक, सुन्तला र कागती रङका पेय हामी केटाकेटी र पाहुनाका लागि हुन्थ्यो भने पानी रङको सोडा बाले राति ‘इगर्यान्ड’ ह्विस्कीसँग मिसाएर खानुहुन्थ्यो।
हामी एकपटकमा एउटा बोतल खोल्थ्यौं। तीन-चार जनाले बाँडेर खान्थ्यौं। बोतल सानो हुन्थ्यो, दुई सय मिलिलिटरको। आफ्नो भागमा पर्ने त्यही ४०-५० एमएलको गुलियो स्वादले संसार जितेको आभाष दिन्थ्यो।
यो पनि पढ्नुहोस् पिचमा घोडा कुदाउँदा चिप्लिएर लड्ला भनि न्यूरोडको सडक आधा ग्राभ्रेल बनाइयो
केही वर्षमा कोक पाइन छाड्यो। त्यसको सट्टा 'डबल सेवेन' भन्ने कोकजस्तै बोतल आउन थाल्यो। नेपालमै कोक बन्न थालेको त २०३५ सालतिर मात्र हो, जब म तीन-चार कक्षा पढ्थेँ।
त्यो पसलबाट पश्चिमतिर हल्का उकालो लागेपछि छाउनी जाने दोबाटोमा झुरुप्प सानो बस्ती थियो, जहाँ नेवार खड्गी समुदायको बसोबास छ। अझ पश्चिम लागेपछि दायाँतिर सानो गणेश मन्दिर थियो भने त्यसको आडमा बज्र पोतेको दुईवटा ठूला सेता घरमा चित्रकार परिवार बस्थे। त्यससँगै जोडिएको घर लामिछाने परिवारको थियो।
त्यसपछि आउँथ्यो त्यस बेलाको प्रख्यात प्राथमिक विद्यालय – कान्ति ईश्वरी। मैले नर्सरी र केजी त्यहीँ पढेको हुँ। गौरी केसी प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो।
युवराजधिराज दिपेन्द्र भर्ना भएपछि त्यस स्कुलको ख्याति चुलियो। कान्ति ईश्वरीपछाडि दली परिवार बस्थे। त्यही परिवारका हिरण्य दली हिसाब ट्युसन पढाउन त्यस भेगका नामुद मास्टर थिए। दली सरसँग ट्युसन नपढी एसएलसी दिने व्यक्ति भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो हाम्रो पालासम्मै।
कान्ति ईश्वरीपछि हाम्रो घरसम्म पुग्दा १२-१४ वटा अरू घर थिए। हाम्रो घरदेखि सोल्टी पछाडिको गेटसम्म अर्को १२-१४ वटा घर भएको मलाई याद छ।
सोल्टीको पर्खाल सुरू हुने ठाउँमा एउटा अर्को पसल थियो। गुलाबी रङको दुईतले घरको भुइँतलामा रहेको त्यो पसल हाम्रो पिप्लामेट, तितौरा, गुच्च्चा आदिको स्रोत थियो।
'मोडको पसल' बाट सोल्टी पछाडिको गेटसम्म करिब एक किलोमिटर दुरीमा यही एक मात्र पसल थियो।
पसलमा एक जना बूढा साहु बस्थे, कृष्णलाल श्रेष्ठ। उनी आफ्नो वास्तविक नामले भन्दा टोलले राखिदिएको नामबाट बढी परिचित थिए- टकटके साहु। उनको पसल नै 'टकटके साहुको पसल' भनेर चिनिन्थ्यो। उनको अगाडि भने यो नाउँ लिन हुन्थेन। गाली गर्दै लखेट्न आउँथे।
कृष्णलालको नाउँ 'टकटके साहु' रहनुको पनि कारण थियो। उनी सामान पोको पार्न कागज टिप्थे र हरेक कागजलाई औंलाले टकटकाएर मात्र त्यसमा सामान पोको पार्थे।
उनी सामान बेच्ने मात्र होइन, पुराना सिक्का, तामा, पित्तल सबै किन्थे। हामी घरमा कतै तार फालेको भेट्यौं भने बोकेर दौडिहाल्थ्यौं। उनी त्यसबाट तामा झिकेर जोख्थे र त्यसबापत् हामीले तितौरा, पिप्लामेट पाउँथ्यौं।
एकचोटि ताहाचलको एउटा छिमेक घरमा बिहे परेछ। सबै छिमेकलाई कार्ड लेख्ने क्रममा पसलका ती साहुजीलाई पनि निम्तो गएछ। निम्तो गर्नेले कार्डमा आदरपूर्वक लेखिदिएछन् – ‘श्री टकटके साहुजी’। उनले कार्ड पुर्याउन जानेलाई झन्डै मारेका थिएनन् रे।
म एक कक्षा हुँदा हाम्रो छिमेकमा पाउरोटी कारखाना खुल्यो– पन्ना पाउरोटी। त्यहाँ दिउँसो तीन-चार बजेतिर पूरै टोल नै बसाउने गरी पाउरोटी पाक्थ्यो। बास आउनेबित्तिकै हामी एक रुपैयाँ लिएर दौडन्थ्यौं।
दाउरे भट्टीबाट पाउरोटी निकाल्नेबित्तिकै तात्तातै कागजको थैलामा राखेर दिइन्थ्यो। हामी घर ल्याएर तातो पाउरोटी तातो चियामा चोपेर खान्थ्यौं। हुन त पाउरोटी डब्बा रिक्सामा पनि घुमाउँथे, तर कुर्ने धैर्य कसको?
पन्ना पाउरोटीको गल्ली जाने बाटोमा ताहाचलका पुराना रैथाने ‘ठूली दिदी’ को घर थियो। ठूली दिदीको आँगनमा नासपातीको ठूलो रूख थियो। मौसममा बाटोसम्मै हाँगा लत्रने गरी हरिया नासपाती फल्थे। त्यो बोटको नासपाती चोरेर नखाने ताहाचलमा विरलै होलान्।
ठूली दिदी असल हुनुहुन्थ्यो, बच्चाहरूले चोरेको देखे पनि गाली नगर्ने। बरू नदेखेझैं गर्ने। कहिलेकाहीँ त टिपेर राखेको आफैं दिने। यति भएपछि हाम्रा लागि उनी निकै ठूलो मनकारी भइहालिन्।
सोल्टीको सिमानाअगाडि सडकभन्दा उत्तरपट्टि खाल्डोमा एक लाइन फाट्टफुट्ट घर थिए। त्यसपछि उता छाउनीको ढिस्कोसम्मै खाली सिम थियो, जहाँ बर्खाको पानी जम्मा हुन्थ्यो। हिउँदमा त हाँसका हुल बास बस्न आइपुग्थे। त्यो सिमक्षेत्र अहिलेको गाईबाच्छा पाटीसम्मै फैलिएको थियो। अचेल पूरै फाँट दुई-चार आनामा बनेका घरले छरपस्ट ढाकिसक्यो।
यता अहिलेको ताहाचल बगैंचा पनि स्याल कराउने ठाउँ थियो। ताहाचलबाट कालिमाटी निस्कने कच्ची बाटो ताहाचल बगैंचा भएर पनि जान्थ्यो। साँझ परेपछि हामी त्यो सुनसान बगैंचा हिँड्न डराउँथ्यौं।
त्यस बेला ताहाचल गाउँको आकर्षण भनेकै सोल्टी होटल थियो।
सोल्टी भन्नेबित्तिकै अहिले पनि मेरो स्मरणमा सेतो रङको साततले भवन आउँछ। ताहाचलको जहाँबाट हेरे पनि देखिने त्यो 'ल्यान्डमार्क' होटलको व्यवस्थापन भारतको ओबरायले सम्हालेका थिए। त्यसैले ‘सोल्टी ओबराय’ भनेर चिनिन्थ्यो।
होटलको नाम 'सोल्टी' किन रहेको होला भनेर मनमा कौतूहल हुन्थ्यो। पछि थाहा पाएँ, सोल्टी होटलका प्रारम्भिक प्रवर्द्धक राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार हिमालयविक्रम शाह र प्रभाकर राणा साइनोमा ‘सोल्टी’ थिए रे। त्यसैबाट यो नाउँ जुरेको रहेछ।
यो होटल म जन्मनुभन्दा चार वर्षपहिले सन् १९६६ मै खुले पनि ओबरायको व्यवस्थापन १९६९ देखि सुरू भयो। अहिले देखिने पूर्व-पश्चिम लम्बिएको भवन त हाम्रै आँखाअगाडि १९८० तिर बनेको हो।
म एक कक्षा पढ्दाको तस्बिरमा हाम्रो घरबाट एक्लो सेतो भवन मात्र देखिन्छ। १९८० मा मेरो ब्रतबन्धताकाको फोटोमा भने नया इँटावाला भवन थपिएको छ। धेरै समयसम्म सोल्टीको पुरानो भवन सेतो र नयाँ भवन इँटावालाकै रूपमा रह्यो। पछि पुरानो सेतो भवनलाई नयाँकै रूपमा ढालियो।
सोल्टी भनेको ताहाचलको मुटुझैं थियो। ताहाचलवासीको रोजगार केन्द्र ।
म नौ-दस कक्षा हुँदा सोल्टी र काठमाडौंमै ठूलो हलचल छायो। यो सन् १९८५ तिरको कुरा हो। अमेरिकाबाट निकालिएपाछि ओशो रजनीशको टोली सोल्टीमा आएर बसेको थियो। रजनीशले पूरै तल्ला 'बुक' गरेर बसेको छ भन्ने खुब हल्ला थियो।
रजनीशको अमेरिकामा जफत भएको 'रोल्स रोयज' गाडीदेखि उनका वरिपरि झुम्ने भक्त र विशेषगरी साधिकाहरूको निकै चर्चा हुन्थ्यो। उनको हिराको घडी, हिरा जडिएको टोपी ... यस्तै यस्तै।
कति दिन त स्कुलबाट साढे तीन बजे छुट्टी भएपछि म जावलाखेलबाट साइकलमा घर आएर, लुगा फेरेर चार बजे सोल्टी होटल पुग्थेँ। कुनै धार्मिक वा आध्यात्मिक आकर्षणले होइन। करिब चार बजे ओशो सोल्टीको द्वारबाट बाहिर विहारका लागि निस्कन्थे। टेनिस कोर्टतिर जान्थे। एकछिन घुमेर फर्कन्थे।
हामी साथीभाइको ध्यान उनले दिनहुँ परिवर्तन गर्ने पहिरन, टोपीमा जडिएको हिरा, हिरा जडिएको घडी र उनी वरिपरि घुम्ने साधिकाहरूमा हुन्थ्यो।
त्यस बेला हाम्रो 'टिनएज' दिमागले ओशो बुझ्ने कुरै थिएन। ओशो भनेपछि खुला यौनका प्रवर्द्धक भनेर बुझेका थियौं। अहिले उनको खरानी रङको आँखाको चमक, हिँडाइको चाल, उनी देखेपछि लठ्ठिने र बेपरवाह झुम्न थाल्ने अनुयायी सम्झँदा उनी साधारण मानव थिएनन् जस्तो लाग्छ।
त्यति बेला हाम्रो उमेरले जे दियो, हामीले त्यही देख्यौं। अहिले ओशो रजनीशलाई प्रत्यक्ष देख्न र दर्शन गर्न पाएकोमा रमाइलो अनुभूति हुन्छ।
रजनीशको बसाइपछि सोल्टीमा भएको अर्को ठूलो उपलब्धी सन् १९८७ मा सार्क सम्मेलन हुँदा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई राख्न बनाइएका 'सुइट' हुन्। त्यसपछि हालसम्मै सोल्टीमा खासै ठूलो परिवर्तन आएको महशुस हुँदैन। 'आइकोनिक' क्यासिनो नेपाल भएको ठाउँ भत्काएर 'मेघा-मल्हार' भन्ने ‘पार्टी प्यालेस’ बनेको बाहेक।
निर्माणका क्रममा सोल्टी होटल ।
अचेल सोल्टी होटल वरिपरिका कति घर सोल्टीभन्दा अग्ला छन्। कुनै समय यस्तो थियो, सोल्टीभन्दा अग्लो घर काठमाडौंमा बन्ला भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियौं।
वि.संं २०२२ ताका निर्माणाधीन सोल्टी होटल ।
सधैं आँखासामु उभिने त्यो सोल्टी अब त हाम्रो घरबाट देखिनै छाड्यो।
सोल्टी मात्र होइन, चन्द्रागिरी डाँडा सधैं अगाडि छर्लंग उभिएझैं लाग्थ्यो। कीर्तिपुरको 'स्काइलाइन' सधैं प्रस्ट देखिन्थ्यो। अचेल प्राय: ती सबै दृश्य धूमिल हुन थाले। म हुर्केको टोलको अस्तित्व, त्यो छिमेक, ती छिमेकी सबै धूमिल सम्झनामा सीमित हुँदै गए।
'एभ्री थिङ ह्याज अ प्राइस' भन्छन्। यो अस्तव्यस्त विकासको मोल हामी काठमाडौंका रैथानेले मज्जाले चुकाएका छौं। यहाँका प्राकृतिक, सामुदायिक लगायत सम्पदा गुमाएर हामीले साँचेको भनेकै यही धूमिल सम्झना हो।
अब त हाँस, बकुल्ला आउने त्यो सिममा काग मात्र आउने गर्छन्। चराहरूको चिरबिर सबै काँ... काँ... काँ... मा सीमित भए।
जग्गाको भाउ पाँच हजार रूपैयाँ रोपनीबाट पाँच करोड रोपनी पुग्यो। घर संख्या २०-३० बाट असंख्य पुगे। गाउँले पारिवारिक वातावरण बिरानो छिमेकमा परिवर्तन हुँदै गयो।
हुँदा हुँदा अचेल त ताहाचल हिँड्दा रैथाने मुहारको दर्शन नै दुर्लभ भइसक्यो।
हाम्रो घर नम्बर ८/२० भने अझै खडा छ। फरक यत्ति हो, पहिले डाँडाको टुप्पोको त्यो घर सडकबाटै प्रस्ट देखिन्थ्यो, अचेल त्यो घर हेर्न आफ्नै आँगनमा उभिनुपर्छ। -प्रस्तुती किरणकृष्ण श्रेष्ठ
सेतोपाटी, जेठ ०५, २०७६
Old photo of Nepal, फेसबुक ग्रुप